Ukusebenzisana: Abathengisi Bayikhulisa Kanjani Imidiya Ephethwe Ngemidiya Ekhokhelwe Neyikhokhelwayo Enobunikazi | Martech Zone
Ukusebenzisana: Abathengisi Bayikhulisa Kanjani Imidiya Ephethwe Ngemidiya Ekhokhelwe Neyikhokhelwayo Enobunikazi
NgoMsombuluko, Disemba 18, 2017 NgoLwesibili, Januwari 12, 2021 UJohn Koetsier
Ukwelapha ukumaketha okukhokhelwayo nokumaketha okungabanikazi ngokwehlukana kubiza ukuguqulwa kwabezimakethe, izinga nemali engenayo. Abathengisi abaningi bahlola iziteshi ngokwehlukana, noma, bahlukanise ukumaketha okukhokhelwayo, okutholwayo, nokungokwabanikazi.
Ushiya u-50-100% wemiphumela yakho engaba khona etafuleni.
Ngisanda kubuza cishe ama-CMO ayikhulu nabaphathi bezokumaketha: Ingabe ukumaketha okuphilayo nokukhokhelwayo kuthonya kanjani futhi kukhulisana kanjani? Okwabo izimpendulo babe nokuqonda okumangazayo, futhi banikeze ubufakazi obunamandla bokuthi abathengisi kufanele bafune futhi basebenzise ukusebenzisana hhayi ngaphakathi kuphela kepha naphakathi kwazo zonke iziteshi zabo zokumaketha.
Ezomphakathi ziyisibonelo esisobala.
Iningi lemikhiqizo yejusi yomphakathi ophilayo okhokhelwe kancane. Kepha abanye abathengisi bathola ukuthi izinzuzo zinweba ngaphezu kwemiphumela engcono yezokuxhumana. Isibonelo, mhlawumbe… ekumaketheni kosesho lwezinto eziphilayo.
Sethule umkhankaso we-Facebook Ad wokukhuthaza uhambo lokunikeza mahhala. Lokhu kubangele izinkulungwane zokuthandwa, amasheya, ama-tweets kanye nezixhumanisi ezingaba ngu-50 ezingenayo ezivela kumabhulogi wokuhamba. Ithrafikhi yethu yokusesha ye-organic ithuthuke ngama-35% esikhathini esiyizinyanga ezimbalwa ngoba amasheya ezenhlalo nezixhumanisi ezingenayo yizici ezinkulu zokuma ku-algorithm yeGoogle. U-Amine Rahal, umsunguli kanye ne-CEO yeLittle Dragon Media
Ngamanye amagama, ukukhokhelwa kwezenhlalo kuholele ekuzuzweni komphakathi okuholele ekutholeni i-SEO kuholele kumthamo wewebhu ophethwe.
Lokho kuyinketho enhle yokubangela, uma ungumakethi onesabelomali esilinganiselwe.
Esinye isibonelo? Khokha ngokuchofoza ku-organic ye-SEO.
Ukuthi nje ushayela ithrafikhi eyengeziwe kuzakhiwo zakho zewebhu kunomthelela omuhle jikelele:
Ngokwesilinganiso, sibonile ukuphakama okungu-10 kuye ku-20% kuthrafikhi yosesho ye-organic yamagama angukhiye nemishwana lapho kubekwa khona izikhangiso, ikakhulukazi ngokusesha okunegama. Lezo zikhangiso nazo ziyabiza kakhulu futhi zisebenza kahle, ngoba ngokuvamile ziyizindleko eziphansi. UKent Lewis, umsunguli kanye noMongameli we-Anvil
Kungani lokhu kusebenza?
U-Laura Simis weCoalmarch uthi njengoba ithrafikhi yamakhasi iyisici ekusekelweni kwekhasi lemiphumela yenjini yokusesha, ukukhuphula ithrafikhi ekhasini elithile ngemidiya ekhokhelwayo kungathuthukisa ikhono lalelo khasi lokubeka kahle.
Ngakho-ke, hlobo luni lwe-lift ongalukhiqiza kusuka kule nqubo yokuhlanganisa i-SEM ne-PPC? Abamakethe engibacwaningile bathi imiphumela yabo isukela ku-10 iye ku-40% lift. Lokho kungenzeka kungaphazamisi umhlaba… kepha empeleni kumahhala.
Isibonelo esisodwa esithakazelisa ngempela: i-SEO ephilayo kanye nezikhangiso zokuthenga ze-Google ezikhokhelwayo.
Lokhu kubangele ukukhushulwa okukhulu kwe-7X kwemali engenayo yomakethisi oyedwa.
Alison Garrison, umqondisi omkhulu kwezokukhangisa e Volusion, ipulatifomu ye-ecommerce yama-SMB, ibone ukuthi ukusebenza kahle kwezinjini zokusesha okwenziwe izinyanga eziyishumi nambili kushaye ukungcola lapho ifaka izikhangiso ze-Google Shopping.
Ngemuva kokuqalisa umkhankaso wokuphakelwa kwezitolo, umsebenzi we-SEO obukade uqhubeke isikhathi esingangonyaka uthole ukudonswa okukhulu, futhi ithrafikhi evela ekufuneni okuphilayo inyuke ngama-325% isiyonke futhi ngaphezulu kuka-400% kusuka kumakhalekhukhwini uwodwa unyaka nonyaka. U-Alison Garrison
Kodwa imali engenayo igxume yaphelela ophahleni futhi… kufaka phakathi imali engenayo yokucinga.
Imali etholwe kusesho lwezinto eziphilayo inyuke ngo-240% ngaleso sikhathi. Izikhangiso zokuphakelwa kokuthenga bekuyisihluthulelo sempumelelo lapha - ithrafikhi yonke inyuke ngaphezu kuka-2,500%, ithrafikhi yeselula inyuke ngaphezu kuka-10,000%, imali ikhuphuke ngaphezu kuka-800%, imali engenayo yeselula inyuke ngaphezu kuka-80,000% - hhayi itypo.
Ngokusobala, iklayenti lakhe beliqala kusisekelo esincane sewebhu kanye nemali engenayo yeselula. Futhi, kuneminye imihume emibili ebalulekile. Eyodwa: utshale imali unyaka wonke ekusebenzeni kahle kwezinjini zokusesha. Lokho kungukuzinikela nokuzikhandla - nombono wesikhathi eside - ongawuboni njalo. Futhi okubili: mileage yakho ingahluka. Ukuthi umthengisi oyedwa uhlose inyanga futhi ashaye izinkanyezi akusho ukuthi wonke umakethi uzothola imiphumela efanayo.
Noma kunjalo, imiphumela iyamangalisa.
Futhi, okungenani, imiphumela yeGarrison ifakazela isidingo sokusebenzisana phakathi kweziteshi zokumaketha. Abakhangisi abangafuni futhi basebenzise ukusebenzisana phakathi kweziteshi zokukhokha ezikhokhelwayo nabaphilayo balahlekelwa yigolide elimsulwa.
Ukutadisha okugcwele ngemininingwane evela kubo bonke abathengisi engikhulume nabo kutholakala mahhala lapha.
Landa Isifundo Esigcwele Lapha
Tags: U-Alison Garrisonallison ikamuisembiliubumbanoUKent Lewislaura simismarketingiziteshi zokumakethaomnichannelimidiya ephilayoukusesha okuphilayoorganic seoimidiya ephethweimidiya ekhokhelwayoukusesha okukhokhelweppcukuqhuma
UJohn Koetsier uyintatheli, umhlaziyi nophambili. NjengoSomnotho Wezelula ku SHUNE, Ngibikezela futhi ngihlaziye izitayela ezithinta imvelo yeselula. Ngibe yintatheli, umhlaziyi, kanye nomphathi wezinkampani, futhi ngikubalile ukukhuphuka komnotho weselula. Ngaphambi kokujoyina i-TUNE, ngakha ithimba locwaningo i-VB Insight eVentureBeat futhi ngaphatha amaqembu enza isoftware yabalingani abanjengo-Intel neDisney. Ngaphezu kwalokho, ngihole amaqembu ezobuchwepheshe, ngakha amasayithi wokuxhumana nomphakathi nezinhlelo zokusebenza zeselula, futhi ngathintana neselula, ezenhlalo, ne-IoT. Ngo-2014, ngabizwa ohlwini lwabangu-100 abahamba phambili embonini yezindaba "osomabhizinisi abasha kakhulu nabathengisi bezimakethe." Ngihlala eBritish Columbia, eCanada nomndeni wami, lapho ngiqeqesha khona i-baseball ne-hockey, yize kungenjalo ngasikhathi sinye.
Iyini i-ROI yekhasimende eliqotho?
Ingabe Ukwethembeka Komkhiqizo Kufile Ngempela? Noma ukuthembeka kweKhasimende?